Malunga Nathi-Jiangxi Nero Commerce Co., Ltd.
I-Jiangxi Nero Commerce Co., Ltd. yinkampani yoshishino kunye neyorhwebo edibanisa uphuhliso, uyilo, imveliso, intengiso kunye norhwebo, kunye ne-1000sq m2 mveliso kunye nabasebenzi abangaphezu kwe-100. Sifumaneka eYifeng, Jiangxi, eyeyona mvelaphi yase China. Ifektri yethu i-Anbao Home Furnishing yasekwa ngo-2011.Sineminyaka engaphezu kweshumi yamava kwimveliso ye-bamboo kunye neemveliso zokhuni. Umzi-mveliso wethu ubusenza urhwebo lwasekhaya kwixesha elidlulileyo.Kodwa kulo nyaka, siza kuthengisa iimveliso zethu kwihlabathi liphela.
Ngaphezu kweminyaka eli-10, sikhethekileyo ekuphuhliseni nasekuveliseni i-bamboo kunye neemveliso zomthi, ezifana ne-bamboo yokusika iiboradi, abaququzeleli bedrowa ye-bamboo, izahluli zedrowa ye-bmaboo, isitya se-bamboo somntwana, i-bamboo kitchenware, ifenitshala ye-bamboo, izibane zekrismas ze-LED kunye nezinye iimveliso zokhuni. .
Ukuza kuthi ga ngoku, sineentlobo ezahlukeneyo zeemveliso ezingaphezu kwama-200, kwaye sinokuvelisa naluphi na uqalo olulungiselelweyo okanye iimveliso zomthi ukuba nje unokusinika imifanekiso, ubungakanani okanye iisampulu. Sinomatshini wokukrola we-laser ochwepheshile kumzi-mveliso wethu, ukuze sikwazi ukubandakanya uphawu lwakho okanye ipateni oyifunayo kwiimveliso zethu. Sifikelele kwintsebenziswano nabathengi abavela eUnited States, eUnited Kingdom, ePakistan nakweminye imimandla. Ngaphandle koko, sineevenkile zethu ze-owm amazon. Ngokusekwe kumzamo oqhubekayo kunye nophuculo lobuchule, besigcina ubudlelwane bentsebenziswano obude nabathengi bethu.
Ixabiso Lethu: Ukunyaniseka, uxanduva, ukusungula izinto ezintsha, ukuzinikela
Inkampani enyanisekileyo; Ngokuvisisana namazwi nezenzo
Ukunyaniseka sisiseko sophuhliso lwenkampani
Uxanduva: bathathe inyathelo lokuqala lokwenza uxanduva, babe nesibindi sokuthatha uxanduva, kwaye bafezekise imisebenzi yabo.
Utshintsho: Gcina isantya kunye namaxesha, qhubela phambili, nesibindi sokuba ngowokuqala.
Ukwenziwa kwezinto ezintsha ngumthombo wamandla kuphuhliso lwenkampani.
Ukuzinikela: Uthando kunye nokuzinikela, inkonzo enyanisekileyo, kunye nokubuyela eluntwini.
Ukuzinikela ngummandla ophakamileyo weengcamango kunye nomgangatho womoya wabantu beGridi kaRhulumente.
Inzuzo yethu: Sinomgca wemveliso opheleleyo kunye neqela le-QC lobuchwephesha lokulawula umgangatho ongqongqo. I-OEM kunye ne-ODM iyafumaneka. Siza kukuphendula kwiiyure ezingama-24, ukukunceda ukusombulula iingxaki zakho.Kwaye siyipasile iFSC.